Kubvumbi 2018 - Network maRadio
musha / 2018 / Kubvumbi
Mwedzi: April 2018
Chishandiso changu chikuru kubva pandakapinda mune ino yese Network Radio chiitiko chave chiri icho Talkpod N58.
Iyi haisi imwe redhiyo inonyanya kufarirwa kubva kune yekutengesa maonero - iyo Inrico T320 inoita kunge hombe mutengesi izvozvi (uye hongu ndine imwe yeavo futi, uye an Inrico TM-7!)
Asi ini ndine nzvimbo yakapfava yeTalkpod.
Chekutanga iyo yekuvaka mhando ndiyo chaiyo yakanakisa yandakaona pane chero Network Radio kusvika ikozvino. Kuti nditi yakagomarara chinhu chekunyepera chaizvo - handisati ndambova newairesi yakaoma kwazvo!
Kechipiri, kukodzera muruoko kune muenzaniso - kungofanana neiyo HT inofanirwa kunzwa, mumaonero angu.
Yetatu, odhiyo inofanira kunzwikwa kuti itende! Pandakaita hurukuro paNetwork Radios nguva pfupi yadarika kukirabhu yangu yemuno, odhiyo kubva kuTalkpod diki yakazadza hombe kirabhu mukamuri zvachose - uye yanga isiri kunyange pahoriyamu yakazara panguva iyoyo. Kunze hazvitendeseke!
Zvisinei iyo Talkpod yakamhanyiswa kumusika kumucheto chaiko kwa2017, uye, sezvazvinowanzoitika nechinhu chero "komputa", iyo firmware yaive diki "tambobare" pakuvhurwa.
Ini ndinogona kuregerera yekare vhezheni yeApple uye yakaganhurirwa ndangariro sezvo isingakanganisa mashandisiro angu neredhiyo imwe jot. Pachine zvakawanda zvendangariro zveese maapplication andingangoda uye anoshanda sezvingatarisirwa pasi pe Android KitKat. Ini handidi kana kushandisa yechipiri SIM kadhi kana SD kadhi futi.
Izvo zvinhu zvandaitambudzika nazvo zvaive zvisingawanzo fanika, wachi ichitaura nguva isiri iyo kunze kwekunge ndaita reset. Iyo bhatiri muzana ichiti 1% apo ini ndaiziva kuti chaizvo hazvigoneke! Ndisingazive zvaiitika pandakaita sendaifunga kuti ndadzima radio "kudzima". Kusuruvara zvinhu kwete nyaya dzinokanganisa kushandiswa kweredhiyo.
The chete zvikuru nyaya yaive yekudzora vhoriyamu, iyo kunyangwe zvine mutsindo zvine mutsindo, dzimwe nguva yaisakwanisika kuenda yakadzika zvakakwana kuti ishandiswe "muchivande".
Zvakanaka ini zvino ndine "redhiyo itsva"!
Talkpod ine, mazuva mashoma apfuura, yakaburitsa new firmware (EU) uye new firmware (US) inoita kunge inogadzirisa yakawanda yeavo niggles.
Kutaura chokwadi, Talkpod yakaburitsa mafemu mashoma kubva muna Ndira asi izvo zvazvino uno zvinoita kunge zvinogadzirisa zvimwe zvinhu kupfuura nakare.
Saka chii chitsva?
Zvakanaka zvakawanda zvezvinhu zvitsva zvinogona kunge zviri "pasi pehood" kugadzirisa, asi kune mashoma anooneka (anonzwika?) Misiyano.
Iwe haugone kuratidza iyo bhatiri muzana ikozvino, ndeipi imwe nzira yekugadzirisa iyo nyaya - pamwe chaiyo pesenti yemamita ichaita kudzoka mune ramangwana?
Paunodzima unit ikozvino, pane kuti upinde muAirplane mode usina kukuudza, inokupa sarudzo inobatsira kuti upinde muAirplane mode kana kuti ubvise zvachose panzvimbo, izvo zvinonyanya kubatsira uye zvine ushamwari.
Iko kudzora kwevhoriyamu kwakagadziridzwa zvakare, kunyangwe ichiri kugona kuita nekumwe kudzora kumavhoriyamu ezasi ekuda kwangu. Zvisinei, izvo zvinogona "kubviswa" mumainjiniya menyu, sekutsanangurwa kwazvino pawebhusaiti - kunyangwe iwo maitiro akapihwa muchinyorwa ichocho akakosha kuyedza nawo (muchokwadi Ham tsika!)
Iri rinobatsira zano zvakare kushandisa yakabhadharwa vhezheni yeButton Mapper software kudzora midhiya vhoriyamu. Android inoita kunge iine matatu kana mana akasiyana mavhoriyamu ekudzora, imwe chete yacho ndeyetsika vhoriyamu senge pawairesi - Bhatani Mapper rinondibvumidza kuti ndigare ndichishandisa "Media" vhoriyamu yekudzora yakatemerwa kune yepanyama knob.
Ndichiri murudo here?
Zvese mune zvese ini ndichiri kuda yangu Talkpod - zvine nharo kuti haisi nyore kushandisa sefoni seimwe Network Network maRadio, sezvo isina kiyi (kunyange ichiri kushanda neyekubata-skrini), asi yenyaya yangu yekushandisa, iri se Radio-kunge HT, yakakwana!
Izvo hazvisi kusiya shack yangu kwenguva yakareba kwazvo. Pano pane imwe "redhiyo itsva" mumwedzi kana maviri munguva. Ndinovimba urikuteerera, Talkpod!
© Kubvumbi 2018
10% Discount pane ese PTT4U maredhiyo
2-Nzira Radio kutaurirana pasina chero renji muganho. Ndiyo PTT4U.
Use yekubvuma BHAIBHERI 10 pa Checkout kuti uwane pasipo pakarepo chero radio, kusanganisira pa Dzinga Software. Kukwidziridzwa kunopera muna Chivabvu 31.
Discount haishande kune kunyorera.
Chii chinoita Radio Radio Amateur?
Ndakava nehurukuro ine hupenyu neimwe yehama dzangu dzepamwoyo dzeHamu rimwe zuva - uye zvakandiita kuti ndifunge zvakare… (nguva dzose chinhu chine njodzi!)
Haisi Ham Radio!
Isu tanga tichikurukura imwe yemahombe makuru ekutaura nezve Network Radios; dambudziko rinoratidzika kunge rinopa vamwe vanhu kuti havagadziri RF pazvikwata zveAmateur vega.
Shamwari yangu yaipokana kuti kushandisa Network Radio yakanga isiri Amateur Radio, kunyangwe paakataura nezve zvishandiso zvakadaro zvinowana IRN nemasaini achibuda paRF zvinongedzo kuburikidza neEcholink, akafara kubvuma kuti iyo inogona kuve Ham Radio, pamwe muchidimbu. , nekuti izwi remunhu rinenge richizobuda, semuenzaniso, anodzokorora amateur kumwe kunhu.
Kwaari iye zvakadaro, IRN kune IRN kana Zello kuna Zello aive zvechokwadi "kwete Ham Radio ”nekuti hapana RF paAmateur Band yakagadzirwa.
Ini ndinowana zvachose nharo iyi - hazvigoneke kupokana kuti Network Radiyo haigadzire zvakananga "Ham RF" kana kushanda yakananga paHam mabhendi.
Asi ini ndinofunga kuti iyi haisiyo yega nyaya iripano, sezvandichauya munguva pfupi…
Hausi Amateur kutoti… chii?
Akaenderera mberi zvakadaro asi akataura kuti hausi "kuve Hamu" kunze kwekunge uri chaizvo kutakura paHamu Bhendi.
Kufunga kwake kwaive kwekuti kana iwe ukashandisa CB, iwe uri "CB-er" uye kana ukashandisa Zello, iwe uri "Zello-er" uye hapana chimwe cheizvi chinoumba chero fomu yeAmateur Radio.
Zvekare ndinonyatsonzwisisa izvi, asi zvakare kwandiri izvi hazvinyatso kumira.
Ngatione kuti sei ndichifunga kuti zvinhu zvachinja.
Kune mazhinji enhoroondo yeHam Radio, zvaive pachena kuti Hams aishandisa chete mabhendi akagoverwa mumagetsi emagetsi. Izvi zvaive muchidimbu nekuti takapihwa kwatiri nehurumende nekuda kwekuyedza uye, kutaura chokwadi, ndizvo chete zvaive zviripo!
Sezvineiwo, hams dzakawanda kuburikidza nenhoroondo hadzina hazvo kunge dzainyanya kufarira kushanda zvachose - kwavo kufarira kukuru kungave kwaive dhizaini dhizaini uye / kana kuvaka.
Ivo chete vakambouya pamhepo apo ivo vaiyedza chimwe chinhu chaisanganisira ndine kufambisa uye kusarudzwa kwechikwata kunogona kunge kwakareva zvishoma kwavari. Vangadai vakave chero kupi paPfupiwa Spectrum muchokwadi, asi vaifanira kunamatira kune akagoverwa Ham Bhendi, nekuda kwezvikonzero zviri pachena.
Vamwe vanogona kunge vanga vari mukugadzirwa kweantena - uye zvakare vakangouya kumabhendi eAmateur kuzoitisa bvunzo dzemumhepo.
Asi ini ndinopokana kana chero weava hobbyist akazviona ivo kwete saHams kusvikira ivo chaivo kutapurirana RF...
Uye zvakadii nezve calligns?
Aya mafoni edu anonyanya chikamu chedu kuzivikanwa saHams.
Pachinzvimbo chisinganzwisisike, ndinozviona seG7DDN kunyangwe ndiri kuwacha, kutyaira mota yangu, kana pazororo - chinenge chiri "chikamu cheizvo zvandiri". Zvinoshamisa kuti hurumende yakapihwa chitupa inogona kuita izvi kwatiri!
Kuita kuti zvinhu zviwedzere kuipa, ini ndinotodaidzwa kunzi "DDN" neshamwari dzangu ham uye nhengo dzekirabhu - ndinoshevedza dzimwe nhengo dzekirabhu nezvisimbiso zvavo zvakare! Kunyangwe shamwari yangu inopokana pamusoro inodaidza shamwari dzake dzese (ivo vakanyanya kunaka ese maHams!) Nezvisimba zvavo.
Sei? Nekuti kuzivikanwa kwedu sevanhu, muchidimbu, kwakaputirwa mumasaini edu, kunyangwe patinenge tisiri "kugadzira Amateur RF".
Kupinda Muzana ramakore rechi 21…
Zvino izvi zvinonakidza apo Internet inosvika panzvimbo yeHamu muma1990.
Pakarepo isu tine fomu nyowani yekuparadzira uye rumutsiriro, mushure memakore mazhinji, yezwi chairo "wireless". Asi izvi hazvisi zvega kuna Hams futi.
Chero ani zvake anogona kushandisa iri pfupi-renji isina waya redhiyo - chero munhu anokwanisa kuwana iyo internet - chero munhu anogona kuve neDX "Maficha" erudzi - ndosaka dambudziko rekuvimba Ham Radio yanga ichirwisana nayo kwevamwe makore…
Izvi zvinoreva here kuti izvo zvinofarirwa naZello uye IRN hazvisi "zvinoshanda"?
Izvi zvinoreva here kuti Hams anofanirwa zvachose kwete shandisa zviwanikwa izvi uchishandisa macalligns avo, nekuti isu hatisi kutumira kune yakatarwa Amateur Bhendi, semuenzaniso?
Zviri nezve sarudzo!
Ndingadai ndakafunga kuti zviri kumusoro us semunhu wega hams kusarudza kuti sei we vanoda kushandisa mafomu matsva ekuparadzira Internet.
Sezvandatsanangura muchinyorwa changu chazvino, "Kutora Zororo", Mukirabhu yangu yemuno, takagadzira chiteshi cheZello. Iyo yakavanzika, password yakachengetedzwa uye moderated. Asi inoshandiswa senge chero Hamu Radio chiteshi ine chaiyo Amateur protocols etc.
Kana ichishandiswa neNetwork Radios (makadhi akabatwa nemaoko eSDR ane mabhatani ePTT), haisi nguva refu isati "yanzwa" seHam Radio munzira dzose.
Bvunza mumwe munhu akamboshandisa imwe yehurefu hwenguva… PTT mabhatani ari pamaoko anobvisa kunzwa kwekushandisa Android mudziyo; chunky mayunitsi muchanza chemumwe akafanana nechero imwe HT; PTT-style comms inobvisa chero chisaririra che "foni-senge" kunzwa, asi isu tinowana zvakanakira sekristaro-yakajeka odhiyo pamwe nezvakanaka zvemazuva ano zvemagariro midhiya, senge pikicha ID yenhengo, (yakakura pakuziva vanhu!) kugona kudzokorora "overs", kugona kuenzanisa uye kuzvidzora-mapurisa nenzira dzakakodzera.
Zello yedu Boka "Ham Radio"? Kana iwe uchizvitsanangura CHETE nekugadzira RF pane Amateur Band, saka kwete. Asi zvirokwazvo anonzwa seni…
Pane imwe tsananguro here?
Mune 21st Century, iri kugadzira "Amateur RF" iyo chete nzira yekutsanangura Ham Radio? Makore makumi mashanu apfuura iwo ungave wakave mubvunzo uri nyore kupindura - izvozvi, handina chokwadi nazvo…
Maitiro echisikigo ekuParadzira anongovhurika kune echinyakare Ham Bhendi uye mawairesi - zvakaenzana mafomu matsva ekuparadzira Internet anongovhurika kumakomputa-akavakirwa "maredhiyo". Haisi chete nyaya ye "mabhiza emakosi"? Shandisa zvishandiso zvakanaka pane izvo zvauri kuyedza kuwana?
Icho chokwadi chekuti Hams iri kutamba nekuyambuka pakati pezvinhu izvi uye internet mafomu ekuparadzira zvinotonyanya kufadza!
D-STAR uye mamwe ma modhi anga ari chikamu cheiyi kuyedza kubvira yekutanga redhijitari yekutengesa ham maredhiyo akabuda mukupera kwema1990.
Uye inongova hobho chete!
Izwi rekuti Amateur rinobva kuLatin "Amare" - kuda.
Mune mamwe mazwi, chero chinhu Amateur chinoitirwa kuda kwacho. Amateur Radio idandaro ratiri kuita (netariro!) Nekuti tinODA redhiyo mukati zvose mafomu ayo.
Asi Zello (uye IRN) zvakare iri fomu redhiyo.
Ehe, inogona kushandisa 5GHz kana 900MHz, zvirokwazvo tinogona kusaziva chaizvo mafriftiti atiri kushandisa chero nguva, asi RF is kugadzirwa. (Ndiri kufungidzira kushandiswa kwechigadzirwa chisina waya chokwadi!)
Isa imwe nzira, kana ndikaita maminetsi gumi kukurukura nemumwe Ham paZello, ndobva ndadzokorora nhaurirano iyoyo izwi neshoko kune imwe seti yemaminetsi gumi pa10 metres, nei imwe ichifanira kutorwa se "inoshanda" uye imwe yacho isiri?
Kana icho chete chinhu chinosimbisa ichi chiri icho chiri pamamita maviri, ndinofunga isu tinofanirwa kubvunza kana isu tisiri kutanga "kupatsanura vhudzi".
Iyo tekinoroji yakakonzera matambudziko - isu hatina kumbofanira kugadzirisa mibvunzo yakaita seiyi munguva yakapfuura.
CB ne446MHz zvaive zvakasiyana kwazvo neHam Radio, asi kuuya kwetekinoroji nyowani ndiko kuri kukonzeresa mibvunzo nyowani (ingangoita yefilosofi) kubvunzwa nezvezvatinofarira uye kwatinotorerwa netekinoroji.
Kana iwe ukaverenga zvinyorwa zvangu nguva dzose, iwe uchaziva kuti ini ndinofunga ichi hachisi chinhu chakashata.
Kuchengeta pfungwa dzakavhurika zvirokwazvo chinhu chakanaka? Pfungwa yakavharwa pamwe zvishoma kudaro?
Asi ini ndinoda Ham Radio!
Ndino! Ini rudo Ham radio mune ese mafomu - Zello / IRN kwandiri ndeimwe "fomu" yeHam Radio, pamwe kwete pane yakatarwa nehurumende yakapihwa Ham bhendi, asi kune zvese zvinangwa uye chinangwa, iyo anonzwa sezvazviri.
Ini zvechokwadi handisi kuzoenda kune pooh-pooh iyo - nekuda kwekuti iri kutumira imwe nhamba yemasekondi pasekondi munzvimbo yangu yemuno. Ini ndinoda kudzidza mashandiro eredhiyo uye kuvaka zvinhu, asi nei izvozvo zvichifanira kunditadzisa kutaura nehama dzangu dzeHamu uye kushandisa maProtocol, ne2.4 GHz Wifi kana zvichidikanwa?
Pandinoshandisa Zello uye IRN, ini ndichiri "G7DDN" uye ndinoshandisa maHam protocols zvinoenderana. Ini handidaro vane kune pamwe, asi ini ndinoita, kunyanya sezvo kirabhu yedu yeZello boka riine yedu yega mitemo-yakasimwa mirau yekutaura kuti tinofanirwa kudaro.
Zvaive nyore kwazvo pasina Indaneti!
Hamu mabhendi aive maHam mabhendi, nhepfenyuro mabhendi aiparadzira mabhendi, manhamba masitepisi aive manhamba zviteshi uye majammers aive jammers.
Iye zvino internet yauya uye yakanganisa zvese nekuita kuzara kwechiitiko cheredhiyo kuwanikwa vose, Broadcast radio, Spy radio, Bhizinesi redhiyo, Emergency services radio, Hobby 2-way radio uye ikozvino yatove ne "hutachiona" Ham Radio. 🙂
Hatifanire kurega matekinoroji matsva achinyatso kujeka. Tinogona kungomira nekushandisa "yechokwadi" Ham Radio uye panguva imwe chete tichimbundira Network maRadio.
Tinogona kuti, "Zvakanaka izvi hazvina kunanga Ham RF asi ndechimwe chinhu chatinogona kushanda pamwe nekushandisa pazvinangwa zvedu."
Zvichida quirk inoshamisa ndeyekuti, dai iyo Internet yaive iripo pakatanga Amateur Radio, ndinoshamisika kana shamwari yangu yepamwoyo Hamu neni tisingatomboita hurukuro kudai nhasi!
Uchishandisa 4G-chete SIM makadhi pane 3G-chete Network maRadio
Mamwe ma4G SIM makadhi haazotsigire ma 3G-chete mawairesi Kana zvirizvo, uchishandisa hunyengeri hudiki, iwe unogona kuita iyo Android radio kufunga kuti ndeye 4G uye uchiri bvumidza iyo kumhanya 3G, uchishandisa 4G-chete SIM.
Heino, iyo 4-nhanho maitiro:
1 - Dial * # * # 3646633 # * # * (Izvi zvinopinda mainjiniya menyu)
2 - Zvino, sarudza Inosarudzika Network Sarudzo
3 - Mune yekudonhedza pasi runyorwa, iwe unofanirwa kusarudza 4G LTE / WCDMA / GSM. Wadaro, ponesa uye reboot redhiyo.
4 - Kana wapedza, ingoisa 4G SIM mune yekutanga SIM slot uye iwe unogona kuchengeta yechipiri SIM slot isina chinhu.
Chishandiso chako chave kuzomhanya pa3G kumhanya, kwakabatana kune 3G network asi uchishandisa 4G-chete SIM kadhi.
Zvave zvakanaka kuva nemazuva mashoma kubva kumanikidziro ebasa rezuva panguva yeIsita.
Ini nemukadzi wangu takazotora nguva tiri muWales uye tichiita zvishoma zvezvinhu izvo isu tese zvatinoda kuita kana tiri kure nemusha. Isu takanyanya kunakidzwa nekufamba zvishoma uye kutyaira tichitenderedza makomo akanaka nemakomo.
Tekinoroji uye hupenyu hwazvino
Izvi zvinosanganisira kushandisa mepu hongu, kunyanya kufamba uchikomberedza mimwe yemigwagwa midiki yemakomo.
Apa ndipo apo, zvakare zvakare, izvo zvandinofungidzira kuti ndaigona kunongedzera "matambudziko" ehupenyu hwazvino, nenzira dzakafanana nenzira dzandinovaona dzichikanganisa chiitiko chedu cheHam Radio, chikasimuka kuti nditange kufunga zvakare…
Zvakanaka, ini ndakanhonga yangu nyowani nyowani Ordnance Survey (Iyo UK Mapping Agency) mapepa mepu yenzvimbo iyi uye ndakazviwana ndayeuchidzwa nezvechinhu chitsva chikuru, sekushambadzirwa pabutiro rekutanga…
Ah hongu, nekuti ini ndatenga mepu mepu, ini ndakakwanirisa yemahara nhare kurodha pasi pepa mepu yeangu iPad & iPhone! Yay!
Ndagara ndiri "pepa-mepu" rudzi rwemunhu, asi ndinonyatsoda mapplication kunyorera pamakomputa angu ega, saka ndakafunga kuti ichi chingave chinhu chakanaka - uye zvazvaive!
Positives uye Negatives
Yakanga yakafanana neyakanakisa yepasirese nyika ine mepu yemepepa chaizvo kunge pabepa asi pane yangu piritsi chidzitiro panzvimbo…
Ndakafarira kugona kusvitsa mumepu ndisingade magirazi ekuverenga…
Kuva nechinzvimbo changu chakanongedzerwa pamepu nguva dzese kuburikidza neGPS kwainakidza…
Kuziva kuti mepu yaizo gadziridzwa otomatiki nemahunhu enzvimbo, senge nyowani-yekupfuura uye nemigwagwa zvaisimbisa ramangwana-chiratidzo zvakare…
Chisinganyanye kutonhorera ndechekuti ini ndaisakwanisa kuwana muono wakakura wenharaunda yangu mune chero ruzivo rwakakura sezvandinogona nemepu yangu yemepepa yakavhurwa - Boo…
Ndakafara ndichifunga kuti ndaiziva kuti mepu yangu yemapepa haizombopera bhatiri!
Uye apo zuva rakanga rabuda, nderipi iwe waunofunga kuti raive nyore kuverenga?
Asi nekuwanda, iko kuwedzerwa kutsva kwaive chiitiko chakanakisa uye kwakanditungamira kuti nditende kuti ndichagara ndiinaye zvose zviri zviviri map shanduro pandakanga ndiri kunze uye nezve mune ramangwana, nekuda kweiyo iyo iPad vhezheni akawedzera chimwe chinhu kune chiitiko chandakanga ndatoziva kwazvo.
Zvino izvi zvinei nechekuita neNetwork maRadio?
Ndiwo mumwe muenzaniso wekuti tekinoroji yakagadzira sei conundrum yehupenyu hwedu muzana ramakumi maviri nerimwe. Network maRadio, kwandiri, akafanana nemepu yepamhepo - chinongedzo icho chinowedzera chimwe chinhu kune yakazara chiitiko, asi chinogona kumira choga zvakare.
Ini ndinoda mepu dzemapepa, ndinogara ndine, ndinogara ndichida - ndinoda RF Ham Radio, ndinogara ndine, ndinogara ndichida.
Asi ini zvino ndave kuda kuve neyangu mepu mepu kuendesa zvakare - sekuda kwandinoda kushandisa Network maRadio sechikamu cheredhiyo yangu yekuvaraidza.
Ivo vaviri vanoshandisa tekinoroji nyowani kusimudzira zvandinofarira.
Asi INOFANIRA kuve mepu mepu chete, zvirokwazvo?
Zvingave zvisina musoro kuomerera pane izvo, kunze kwekunge ini nguva dzose shandisa mepu yemapepa, iyo yandisiri kufamba nayo "nenzira kwayo"!
Saizvozvowo, ini handitore maonero ekuti, kana ndiri kushandisa RF, zvinofanirwa kunge zviri pane rimwe bhendi kuti ndive naro mafaro uchishandisa.
Pamwe dambudziko riripo nenyaya yekuti zvese izvi zvekuvaraidza ndizvo chaizvo izvo, zvekuzvivaraidza nazvo. Zvinhu zvakaitirwa kutiunzira mufaro.
Hongu, zvimwe zvekuzvivaraidza nazvo zvinoda marezinesi kubva kumatunhu ehurumende kuti zvishande; kupfura, kutyaira (zvechokwadi kune mamwe marudzi emotokari), kubhururuka uye dzimwe nzira dzeredhiyo.
Asi zvine nharo chinhu chikuru chakaitwa nehunyanzvi mu21st Century kutipa zvimwe sarudzo pamusoro sei kutevera zvido zvedu.
Mepu yepamhepo inondiitira iyo kana uchifamba, sezvinoitwa neNetwork Radio kune yangu radio hobby.
Uye izvi zvinogona kunge zviri kunetswa neHam Radio hobho yedu.
Chii chaunoda kuti hobho yako ive?
Iwe unoona, isu ikozvino tave nehunyanzvi hwekugadzira Radio iyo hobby we unoda kuti ive ye isu. Tinogona kuumbiridza kune chii we unoda kuti ive uye ita ye us.
Izvi zvinoreva kuti isu tichiri kukwanisa kudzingirira DX pa20m kana tichida; tinogona kutora chikamu mumakwikwi emaawa makumi mana nemasere kana tichida; asi isu tinogona zvakare kushandisa IRN yenzanga yenzvimbo-yekuvaka kuburikidza neredhiyo, senge ichangobva kuumbwa DigiCommCafé IRN boka riri kuyedza kuita, zvakare kana tichida.
Haisi iyo imwe mhando yeRadio inotsiva imwe, ndeyekuti ivo kuwirirana mumwe nemumwe, asi senge mepu yepamhepo inozadzisa bepa rimwe.
Yangu yemo Radio Club ine yega yega Zello Boka - chete vanobhadharwa-nhengo dzinogona kujoina iyo, asi mitemo izvo zvatakasarudza pamusoro, ndezvekuti isu TINOFANIRA kushandisa Hamu protocols. Inoongororwa uye kune imwe nhanho inodzorwa. Iwe unogona kuti isu hatisi ivo chete vashandisi asi zvakaenzana nemvumo yekupa mvumo! 🙂 Ndiyo nzira we vanoda kuti ishande.
Nhengo dzisina-marezinesi dzinogona kuve ne "Club callign", iyo yavanoshandisa kudzamara vawana yavo Hamu kufona. Ivo vanogona kudzidzira kushandisa Ham Radio zvakachengeteka munzvimbo yavari pakati pevamwe shamwari uye vanogona kuita zvikanganiso vasina kukanganisa imwe Hams.
Hongu yakavharwa, hongu zvakavanzika, asi tiri kunakidzwa kushandisa zvinhu yeHam Radio mune imwe nzira - imwe iyo we kuda kushandisa uye kushandira us.
Iyo yakanaka yakashongedzwa inozivikanwa zvakare!
Kuwedzeredza zvishoma kumberi, isu hatifanire kunge takamanikidzwa kwazvo nemirau nemirau yaive yakakosha pakavambwa hobho.
Network maRadio anoshandisa Internet Kuparadzira, kwete Ionospheric kuparadzira - ivo havadi rezinesi nekuti Internet yakavhurika kune vese. (Shortwave Transmitters ehe saizvozvo, shandisa Ionospheric Propagation uye unoda rezinesi sevashandisi vanoda kunzwisisa zvinorehwa nekutanga mafomu eRF mumhepo)
Asi isu tinogona kuramba tichifara nemidziyo iyi uye tichiwedzera hams dzakawanda dziri kuita.
Vamwe vanozvishandisa zvinongoperera-kumagumo; vamwe vanozvishandisa sechikamu cheHam-bhendi kuInternet link; vamwe vanotovashandisa kudzora kure uye PTT avo vari kure maHF transceivers.
Chero ipi nzira, Network maRadio anoita kunge ari kuve chishandiso chakakosha kune vanofarira redhiyo vemarudzi ese.
Zviri nyore kwazvo kugogodza kana kuvadzima hongu - asi pamwe munhu anofanira kutanga atoedza mudziyo wakadaro, usati wadaro?
Unogona kushamisika zvinonakidza nekusimudzira kwavangaite kune yedu huru yekuvaraidza.
Mepu yepaindaneti chero ani?
© Chris G7DDN - Kubvumbi 2018
Posted on April 5, 2018 Dai 3, 2018
Nzira yekuwedzera sei mic kuwana pane iyo Inrico TM-8
Izvi zvichavandudza mimwe mishumo yeasina maikorofoni odhiyo yeiyo Inrico TM-8
Ndiwedzere redhiyo ne iyi firmware Uye tevera mirayiridzo iyi. Izvo zvakare ichabvisa "mapopoma" ruzha. Ipapo, iwe unogona kuwedzera iyo kuwana seichi:
Enda iyo "foni" app uye dial: * # * # 3646633 # * # *
Izvi zvichapinda muInjiniya Menyu
Wobva waisa iyo yepamusoro bhaa ku "Hardware Kuyedza"
Enda kuAudio, Normal Mode uye chinja Type kuti "Mic"
Sarudza Chikamu 4 uye gadzirisa kukosha kune 255 wobva wadzvanya pane "set".
Izvi zvakandishandira. Mamwe ma audiophiles akataura kuti mushure mekutsiva maikorofoni electret capsule mhedzisiro yacho yakatove nani.
Uye iwe waita!